Waa kuwan tiro ka mid ah deeqaha waxbarasho ee caafimaadka ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee aan u aragno inay ugu fiican yihiin kuwa kale ee la heli karo sanadkiiba.
Sayniska Caafimaadka guud ahaan waa goob aad u muhiim ah oo daraasad ah laakiin aad qaali u ah, khidmadda waxbarashada ee barashada daawada ama koorsooyinka la xiriira ayaa ka baxsan saqafka, wali dad badan ayaa doonaya inay ku weynaadaan arimahan inay awoodaan awooda dhaqaale iyo hadii kale.
Adiga ayey kuu fiican tahay haddii aad awoodo inaad maalgeliso waxbarashadaada qaybta caafimaadka. Kuwa aan awoodin, laakiin cilmiga tacliinta leh, waxaa jira deeqo waxbarasho oo caafimaad oo Kanada ah oo aad codsan karto waxaanan taxnay 11 ka mid ah oo aan u aragno inay yihiin kuwa ugu fiican inta kale.
Waa wax fiican, deeqaha waxbarasho ayaa la heli karaa sanadkiiba sidaas darteed, haddii aad seegto tan sanadkan, waxaad fiirineysaa sanadka soo socda.
Maqaalkani wuxuu bixinayaa macluumaad buuxa oo ku saabsan deeqda waxbarasho ee ugufiican Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, oh haa, taasi waa sax, waad ku weynaan kartaa qaybta caafimaadka iyada oo loo marayo deeqaha waxbarasho ee Kanada oo loo dhigay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu barto dhulka.
Haddii aad rabto inaad tagto Bachelor-ka caafimaadka iyo shahaadada qalliinka, waxaad ku mari kartaa hagahan sida loo helo ogolaanshaha MBBS ee Kanada.
1 Maxaad ugu Baranaysaa Caafimaadka Kanada?
2 Sida loo Codsado Deeqaha Caafimaadka ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
3 Deeqaha Caafimaadka ee ugu Fiican Kanada Ardayda Caalamiga ah 2020
3.1 AB WISWELL SCHOLARSHIP (JAAMACADA DALHOUSIE)
3.2 AJ DOUGLAS SCHOLARSHIP EE BULSHADA CAAFIMAADKA IYO CUDURKA (JAAMACADDA QUEEN)
3.3 DR. F. LLOYD ROBERTS SCHOLARSHIP (JAAMACADA ALBARTA)
3.4 ADIEL STEACY DUGSIYADA XUSUUSNIMADA (JAAMACADDA QUEEN)
3.5 AE BOWIE SCHOLARSHIP OO CAAFIMAAD LEH (JAAMACADDA ALBERTA)
3.6 ALAN TARSHIS IYO NANCY GOODMAN SCHOLARSHIP EE CAAFIMAAD (DALHOUSIE UNIVERSITY)
3.7 ALBERT A. BUTLER Award IN ORTHOPEDICS (JAAMACADA MCGILL)
3.8 COLLEGE OF SCHOLARSHIP CULAJADA CAAFIMAADKA (JAAMACADA SASKATCHEWAN)
3.9 DOUGLAS IYO JEAN BAILEY SCHOLARSHIP (JAAMACADA BRITISH COLUMBIA)
3.10 DR. DONALD IYO CHRISTINA SI AAD ISKUULKA DUGSIYADA CAAFIMAADKA (JAAMACADA ALBERTA)
3.11 ALEX PEEPRE DUGSIYADA XUSUUSNIMADA (JAAMACADA GUELPH)
Maxaad ugu Baranaysaa Caafimaadka Kanada?
Marka hore, Kanada waa meel xiiso leh oo wax lagu barto iyada oo ay ugu wacan tahay qaab dhaqankeeda xun iyo sidoo kale sababaheeda nabadgelyo maadaama waddanku ka mid yahay meelaha adduunka ugu heerka ugu hooseeya ee dambiyada.
Sababta kale ee wanaagsan ee lagu barto caafimaadka iyo koorsooyinka caafimaadka ee Kanada, jaamacadaha dalka ee bixiya daawada iyo koorsooyinkeeda laxiriira waxay leeyihiin xarumo cilmi baaris heer sare ah, casriyeysan iyo ardeyda caafimaadka ubaahan inay sifiican wax ubartaan sidookale shahaadadaada ayaa laga aqoonsan doonaa meelkasta oo aduunka.
Kahor qorista maqaalkan, waxaan sameeyay baaritaano sax ah oo balaaran waxaana awooday inaan la imaado deeqdan waxbarasho ee Kanada ee ardayda caalamiga ah mana aha kaliya qaar ka mid ah jinsiyadaha la xushay, codsigan deeqdani wuxuu u furan yahay dhammaan ardayda dhammaan adduunka marka laga reebo haddii kale lagu sheegay mid ka mid ah.
Kahor intaadan bilaabin inaad ku faraxsanaato mowduuca ugu muhiimsan, waa inaan weydiiyaa;
Ma taqaanaa sida loo dalbado deeqda waxbarasho ee Kanada sidii arday caalami ah? Ama waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn inay jiraan dukumiintiyo lagama maarmaan ah oo aad u baahan tahay inaad haysato oo aad haysato iyo nidaamyada aad u baahan tahay inaad raacdo si loo hubiyo in dalabkaaga deeq-waxbarasho uu noqdo mid guuleysta.
Aan u cadeeyo midaas dhabta ah ka hor intaanan u galin mowduuca weyn.
Sida loo Codsado Deeqaha Caafimaadka ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Haysashada dukumintiyada soo socda; fiisada ardayga ama ogolaanshaha waxbarashada, Aqoonsiga ansaxsan sida Baasaboorka, bayaanka ujeedka, warqad talo bixin ah, CV ama resume, natiijooyinka natiijada imtixaanka aqoonta xirfadeed ee luqadda (TOEFL, SAT, GRE ama GMAT), dibloomooyin, shahaadooyin, qoraallo ama shahaadada dugsigaagii hore. .
Xulo jaamacad aad dooratay oo bilaw inaad sameyso cilmi baaris iyo xiriir laxiriira deeqda waxbarasho ama aad dalbato deeqo waxbarasho oo kale oo dibada ah kadib markii lagaa dhigo koorsada.
Xullo koorso caafimaad oo aad dooratay ka dibna bilow codsiga saxda ah ee lagu sameyn karo khadka tooska ah ama khadka tooska ah
Ku bilow arjigaaga waqtiga loogu talagalay si aad u hesho fursado sare oo ah in codsigaaga dhakhso loo hubiyo.
Dukumiintiyadan iyo habraacyada dalabku way ku kala duwan yihiin jaamacad illaa jaamacad sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad si toos ah ula xiriirto hay'adda aad doorbidayso si aad u hesho hagis dheeraad ah ama aad uga akhriso bogga deeqda waxbarasho.
Hoos waxaa ku yaal liiska 11 deeqda waxbarasho ee caafimaadka ee Kanada oo diyaar u ah inay ka helaan codsiyada ardayda caalamiga ah sanad walba. Fursadahaan waxbarasho ee caafimaadka waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ku bartaan koorsooyinka ka hooseeya caafimaadka ee Kanada.
Waxaan ku liis garaynay deeqdan waxbarasho oo ay weheliyaan iskuulada laga heli karo.
Deeqaha Caafimaadka ee ugu Fiican Kanada Ardayda Caalamiga ah 2020
B. Wiswell Scholarship (Jaamacadda Dalhousie)
J Douglas Scholarship ee Caafimaadka Bulshada iyo Epidemiology (Jaamacadda Queen)
F. Lloyd Roberts Deeq waxbarasho
Adiel Steacy Memorial Scholarships (Jaamacadda Queen)
AE Bowie Deeqda Caafimaadka (Jaamacadda Alberta)
Alan Tarshis iyo Nancy Goodman Deeqda Caafimaadka (Jaamacadda Dalhousie)
Albert A. Butler Abaalmarinta Orthopedics (Jaamacadda McGill)
Kuleejka Deeqda Shahaadada Kuliyada Caafimaadka (Jaamacadda Saskatchewan)
Douglas iyo Jean Bailey Scholarship (Jaamacadda British Columbia)
Donald iyo Christina Jolly Deeqda Caafimaadka (Jaamacadda Alberta)
Alex Peeper Memorial Scholarship (Jaamacadda Guelph)
AB WISWELL SCHOLARSHIP (JAAMACADA DALHOUSIE)
Tani waa deeq waxbarasho oo caafimaad oo Kanada ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee shakhsiyaadka ay kafaala qaadaan AB Wiswell. Waxay u furan tahay ardayda caalamiga ah ee doonaya inay bartaan caafimaadka.
Ardayda la aqbalay waxay baran doonaan daawo ama koorso kale oo caafimaad oo laxiriira jaamacada Dalhousie, kuliyada caafimaadka.
Deeqda waxbarasho ma ahan mid ay furayso jaamacaddu laakiin waa a deeqaha waxbarasho ee dibedda saddexaad ayaa kafaala qaaday Wiswell.
AJ DOUGLAS SCHOLARSHIP EE BULSHADA CAAFIMAADKA IYO CUDURKA (JAAMACADDA QUEEN)
Deeqdani waxaa maalgaliya AJ Douglas iyo Frances Douglas ardayda caalamiga ah inay wax ka bartaan caafimaadka bulshada iyo epidemilojiyadda Jaamacadda Queen, Kulliyadda Cilmiga Caafimaadka waana u furan tahay ardayda adduunka oo idil inay dalbadaan.
Waxaa sidoo kale jira deeqo waxbarasho oo fara badan oo ay bixiso jaamacadda kuwaas oo daboolaya ardayda aadaya koorsooyinka caafimaadka.
DR. F. LLOYD ROBERTS SCHOLARSHIP (JAAMACADA ALBARTA)
The Barnaamijka deeqda waxbarasho ee Roberts waxay u furan tahay dhammaan ardayda caalamiga ah inay ka codsadaan Jaamacadda Alberta inay wax ka bartaan caafimaadka kulliyadda caafimaadka iyo ilkaha ee jaamacadda.
Isla bogga, waxaa sidoo kale jira tiro kale oo ah deeqo waxbarasho oo kale oo Kanada ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Qiyaasta ugu weyn ee ku saabsan dhammaan deeqaha waxbarasho ee laga heli karo bogga Jaamacadda Alberta deeqda waxbarasho caafimaad waa mid sare ama ugu yaraan, waxqabadka tacliinta sare.
ADIEL STEACY DUGSIYADA XUSUUSNIMADA (JAAMACADDA QUEEN)
Ardayda ka socota adduunka oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan barnaamijkan deeq-lacageedka si ay u bartaan caafimaadka iyo koorsada la xidhiidha ee Jaamacadda Queen.
AE BOWIE SCHOLARSHIP OO CAAFIMAAD LEH (JAAMACADDA ALBERTA)
Barnaamijka deeqda waxbarasho ee Bowie waxaa lagu bixiyaa Jaamacadda Alberta ardayda ka kala timid adduunka oo dhan waxay xaq u leeyihiin dalab lagu baranayo daawada illaa qalin-jabinta.
ALAN TARSHIS IYO NANCY GOODMAN SCHOLARSHIP EE CAAFIMAAD (DALHOUSIE UNIVERSITY)
Tani barnaamijka deeqda waxbarasho ee caalamiga ah waxaa bixiya Alan Tarshis iyo Nancy Goodman ardayda caalamiga ah (qofwalba wuu uqalmaa) inuu ku barto daawada Jaamacadda Dalhousie.
ALBERT A. BUTLER Award IN ORTHOPEDICS (JAAMACADA MCGILL)
Jaamacadda McGill waxay deeq waxbarasho siineysaa ardayda caalamiga ah ee adduunka oo idil si ay ugu bartaan lafaha orthopedics lacag la’aan.
Tani Deeqaha caalamiga ah ee orthopedics waxaa kafaala qaadaya Alberta Butler waxaana laga heli karaa oo keliya Jaamacadda McGill.
COLLEGE OF SCHOLARSHIP CULAJADA CAAFIMAADKA (JAAMACADA SASKATCHEWAN)
Jaamacadda Saskatchewan ayaa tan bixisa deeqda waxbarasho ee qalin jabinta ee caafimaadkeeda loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba iyo u-qalmitaanku wuu u furan yahay ardayda adduunka oo idil.
DOUGLAS IYO JEAN BAILEY SCHOLARSHIP (JAAMACADA BRITISH COLUMBIA)
Deeqdan waxaa lagu bixiyaa Jaamacadda British Columbia iyo oo ay kafaalo qaadeen Douglas iyo Jean Bailey ardayda caalamiga ah inay wax ka bartaan caafimaadka Kanada.
DR. DONALD IYO CHRISTINA SI AAD ISKUULKA DUGSIYADA CAAFIMAADKA (JAAMACADA ALBERTA)
Tani waa deeq waxbarasho oo kale oo ay bixiso Jaamacadda Alberta oo ay maalgaliso Dr Donald iyo Christina Jolly ardayda caalamiga ah inay wax ka bartaan caafimaadka Kanada.
ALEX PEEPRE DUGSIYADA XUSUUSNIMADA (JAAMACADA GUELPH)
The Deeqda waxbarasho ee 'Alex Peepre' waxaa loogu talagalay ardayda caalamiga ah inay ka bartaan caafimaadka Jaamacadda Guelph waxayna u furan tahay dhammaan jinsiyadaha.
Waa inaad ogaataa inay jiraan deeqo waxbarasho oo dheeraad ah iyo deeqaha waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah laakiin maqaalkani wuxuu kuu keenayaa 11 ugu fiican ee aad ka dooran karto.
Jaamacadaha ku yaal Kanada waxay leeyihiin xarumo cilmi baaris caafimaad oo heer sare ah iyo manhajyada wax lagu barto waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka. Jaamacadahaani waxay kaa dhigi doonaan xirfadle caafimaad oo wanaagsan oo ka mid ah qaybaha caafimaadka ee aad go'aansato inaad ku weynaato shahaadadaada iyo tababarkaagana waxaa laga aqoonsan doonaa adduunka oo dhan.
Intii aan ku siinayay tilmaan-bixiyahan ku saabsan deeqaha waxbarasho ee caafimaadka ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, ma awoodo markii mid ka mid ah fursadahaas deeq-lacageed ay joojin karaan inay jiraan maadaama ay dhammaantood yihiin fursado deeqo waxbarasho oo saddexaad ah oo aan si toos ah jaamacaduhu u bixin laakiin lamaanahooda.
Barnaamijyada Shahaadada Jaamacadeed ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Deeq waxbarasho oo dhammaystiran oo dawladdu siiso ardayda caalamiga ah
Wadamada aan u baahnayn IELTS ee Shaqooyinka
deeqaha caafimaadka ee ardayda Kanadadeeqaha caafimaadka ee canada ee ardayda kanadadeeqaha caafimaadka ee canada ee ardayda caalamiga ah
Previous Post:15 Deeqda waxbarasho ee ugu sareysa ee Nigeria
Post Next:17 CPD-da Bilaashka ah ee Macallimiinta
Pingback: 9 Dugsiyada Pre Med ee ugu Fiican California 2021
Pingback: 100-ka dugsi ee ugu sarreeya pre-med oo leh khidmadooda hadda 2021
Anika Ashraf wuxuu leeyahay,
August 18, 2021 at 7: am 57
Jaamacaddee ayaa siisa deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo Kanada haddii aan u qaato qalliinka neerfaha?
Ibtiism Gul wuxuu leeyahay,
August 7, 2020 at 8: am 42
Ma weydiistaan ​​dhibcaha fasalka 12aad?
oo sideen ku heli karaa deeqaha waxbarasho?
Israa'iil Lawson wuxuu leeyahay,
June 17, 2020 at 10: am 33
Sideen ku heli karaa fursaddan deeqdan waxbarasho?